Warshadda Miisaanka - Soosaarayaasha Miisaanka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
GNH ting Daabacaadda gacanta ca Miisaanka Crane
Heerkulka sare ee wiishka elektiroonigga ah ee iska caabbinta wuxuu leeyahay xiriir isgaarsiineed kombiyuutar oo dhameystiran iyo shaashad shaashad ballaaran oo wax soo saar ah oo ku xirnaan kara kombuyuutar.
Dusha sare ee cabbirka wiishka elektiroonigga ah ee heerkulka sarreeya ayaa si buuxda u niikili u dahaadhan, ka hortagga miridhku iyo ka-hor-tagga, iyo noocyada dabka iyo qarax-caddeyn la'aanta ah ayaa la heli karaa.
Heerkulka sare ee wiishka elektaroonigga ah ee u adkaysta qalabka waxaa lagu qalabeeyaa mootada afar-taayirle ah oo gacanta lagu dhigto si loo kordhiyo baaxadda adeegga ee cabbirka wiishka u adkaysta heerkulka sare.
Culeys xad dhaaf ah, hoos u dhig bandhig xusuusin ah, alaarmiga danab hooseeya, qaylo-dhaanta marka awoodda batteriga ay ka yar tahay 10%.
Heerkulka sare ee wiishka elektiroonigga ah ee u adkaysta wuxuu leeyahay shaqeyn otomaatig ah oo otomaatig ah si looga hortago waxyeelada batteriga ee ay keento iyadoo la illaawo in la xiro
GNP I MAGACA DAABACA） Qiyaasta Crane
Cusub: Naqshadeynta wareegga cusub, waqtiga sugitaanka oo dheer iyo xasillooni badan
Degdeg ah: Naqshadeynta dareemayaasha isku-dhafan oo tayo-sare leh, miisaan, deg deg ah, sax ah oo xasilloon
Wanaagsan: Tayo-sare oo si buuxda uxiran, batari dib-u-cusbooneysiin-lacag-la'aan ah, saameyn-sare oo saameyn ku leh kiiska aluminium aluminium
Xasilloon: barnaamij kaamil ah, wax shil ah, hops lahayn
Qurux: Muuqaalka moodada, qaabeynta
Gobolka: Kontaroolka fog ee gacanta, ku habboon oo awood badan
Waxqabadka guud iyo tilmaamayaasha farsamada:
Soo bandhig qeexitaannada Ultra-high dhalaalaya 5-kursi sare oo 30mm ah
Akhrinta waqtiga xasilinta 3-7S
GNSD （Xararad - Shaashad Weyn ca Iskeelka Crane
Miisaanka wiishka elektaroonigga ah ee xarkaha leh, qolof qurux badan, adag, gariir lidka ku ah iyo caabbinta shoogga, waxqabadka biyuhu wanaagsan yihiin. Waxqabadka faragelinta ee ka hortagga korantada, waxaa toos loogu isticmaali karaa qalabka elektromagnetic-ka. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa boosteejooyinka tareenka, birta iyo birta, macdanta tamarta, warshadaha iyo shirkadaha macdanta.
JJ Tusiyaha Miisaanka Biyaha
Heerkisa gudbintu wuxuu gaari karaa IP68 sax ahaantuna waa sax. Waxay leedahay shaqooyin badan sida digniinta qiimaha go'an, tirinta, iyo ilaalinta culeyska xad dhaafka ah. Saxanka waxaa lagu xiraa sanduuq, sidaas darteed waa biyo la'aan waana sahlan tahay in la ilaaliyo. Qalabka xamuulka ayaa sidoo kale ah mid aan biyuhu lahayn oo wuxuu leeyahay difaac la isku halleyn karo oo ka yimaada mashiinka.
Heerkisa gudbintu wuxuu gaari karaa IP68 sax ahaantuna waa sax. Waxay leedahay shaqooyin badan sida digniinta qiimaha go'an, tirinta, iyo ilaalinta culeyska. Way fududahay in la rakibo oo ku habboon in la isticmaalo. Labada madal iyo tilmaamuhuba waa biyuhu. Labaduba waxay ka samaysan yihiin bir bir ah.
Heerkisa gudbintu wuxuu gaari karaa IP68 sax ahaantuna waa sax. Waxay leedahay shaqooyin badan sida digniinta qiimaha go'an, tirinta, iyo ilaalinta culeyska.
Tilmaamaha miisaanka ee miisaanka keydka
48mm bandhig cinwaan cagaaran oo cinwaan weyn ah
8000ma lithium baytariyada, in kabadan 2 bilood oo lagaa qaadayo
1mm qaro adag oo guryaha birta ah
Kursiga birta ahama ee T-qaabeeya wuxuu u baahan yahay inuu kordhiyo qiimaha ku saabsan 2 doolar
Tilmaamaha Miisaanka Birta ahaanta
Wareejiye silig naxaas ah oo buuxa, isticmaal laba-gees ah oo lagu dallaco laguna xiro
6V4AH batari sax ah oo la hubo
360-degree isku xiraha wareegsan oo leh xagal daawasho la hagaajin karo
Kursiga birta ahama ee T-qaabeeya wuxuu u baahan yahay inuu kordhiyo qiimaha
Tilmaamaha Miisaanka Birta ee ahama Qarax
304 guri aan lahayn oo bir ah oo leh giraan caag ah oo aan biyuhu xirin.
Ikhtiyaar ah 232 propotal
4000ma lithium baytariyada, 1-2 bilood hal mar oo lacag ah;
Iyada oo shahaado-caddeyn qarax, la 3.7V patent badbaadinta awood
New- ABS tilmaame Miisaanka loogu talagalay miisaanka miisaanka
Shaashadda weyn ee miisaanka LED-ka
Miisaanka iyo dareemiddu waa la isku hagaajin karaa, iyadoo la qabanayo hawlo dhammaystiran
Tilmaame Tirinta ABS ee cabirka barxadda
OCS-GS （Xararad） Miisaanka Crane
1、Qalab isku dheelitiran oo heer sare ah
2、Beddelaadda A / D: Beddelidda 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital
3、Giraan jillaab ah, ma fududa in la xoqo oo miridhku ka baxo
4、Hook naqshadeynta guga si looga hortago miisaanka walxaha inay dhacaan
Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Miisaanno La Xaqiijiyay, Mass Calibration, Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Shear Beam Load Cell,